Yakachipa CNC yendarira zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Brass CNC hwokugaya-nemazvo ndarira azvikuya zvikamu
Brass CNC yekugaya ndeyekuisa imwe kana chidimbu cheplate pane chokurukisa pazasi pechokurukisa, uye chokurukisa chakashongedzerwa nematurusi ekucheka. Iko michina zvinhu zvekucheka zvakare zvine mukurumbira kupfuura zvinhu zvendarira. Iyo isina musono mhangura chubhu yakadhonzwa kubva kwendarira yakapfava uye ine yakasimba yekupfeka kuramba. Iyo chaiyo yekugaya zvikamu muCCC machining emhangura masevhisi akakodzera maindasitiri michina, smart imba, kutaurirana uye makomputa.
Zvakanakira Shanghai Ouzhan yendarira azvikuya zvikamu
- Yakasimba kupfeka kuramba
- Yakanaka ductility
- Flexible uye anti-ngura
- Nyore kuumba
-Yakanakisa tensile simba, anti-ngura
OEM yakagadziriswa ndarira yekugaya sevhisi-China Shanghai Ouzhan CNC yendarira yekugaya zvikamu zvemugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, yakakwira-chaiyo CNC yekugaya zvikamu zvendarira zvine mhando yakagadzikana uye yakavimbika inogona kugadziriswa. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuona iko kugadzirwa kwakakwana kwendarira yekugaya muchina zvikamu. Uye zvakare, iyo CNC yakagezwa zvigadzirwa zvendarira zvakapihwa zvakanyatso kutevedzera zvemhando yepamusoro uye zvinogona kushandiswa mune dzakasiyana maindasitiri mafomu. Uye isu tinogona kupa anokwikwidzana mutengo masevhisi endarira CNC azvikuya zvigadzirwa kune edu anokosha vatengi.
Kushandiswa nendarira azvikuya zvikamu
Kurapa uye kwemishonga, mota, kwemauto, Hardware, matoyi, kutaurirana, nezvimwewo Zvakaringana ndarira CNC mamirimita zvikamu zvinogona kushandiswa mumidziyo yemumba, mainjiniya uye pombi dzemvura.
Zvakanakira Ouzhan yendarira azvikuya sevhisi
- Zvese zvakagadziriswa CNC zvigadzirwa zvendarira zvakaiswa pasi peyakaomeswa mhando kuongororwa.
- Sekureva kwemadhirowa kana masampuli ekugadzira zvikamu zvendarira zvekugaya.
- Mumunda wendarira fittings, yedu hombe mukana ndewe kugadzirwa kwendarira fittings, bhora mavharuvhu, nezvimwewo, uye isu tine hukama hwepedyo nemakambani makuru muEurope, South Korea, Thailand, nezvimwewo.
Pashure: Yakasarudzika jira simbi yekutengesa zvikamu
Zvadaro: Yakagadziriswa simbi isina simbi yekushandura zvikamu zvekugadzirisa michina zvikamu
Customized electroplated nendarira azvikuya zvikamu pr ...